दिदीबहिनी बने दाजुभाई, थाहा पाएपछि… – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दिदीबहिनी बने दाजुभाई, थाहा पाएपछि…
दिदीबहिनी बने दाजुभाई, थाहा पाएपछि…
एजेन्सी । इस्लामादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु । यस कुराले मलाई यति धेरै खुसी छ, म बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई सानैदेखि केटीको लुगा मनपर्दैन थियो । मेरो काम र बानी केटाजस्तै थियो । मेरा सात बहिनी दुई जना भाइ पाएर निकै खुसी छन् । मेरो भाइ मुराद पनि खुसी छ ।’ यो भनाइ पञ्जाब प्रान्तमा गुजराज जिल्लाको सोनबडी गाउँको द्वितीय वर्षका छात्र वलीद आबिदको हो । लिङ्ग परिवर्तन अघि उनको नाम बशरा आबिद थियो । उनको सानो भाइ मुराद आबिद, जो नौ कक्षाको छात्र हो, अपरेशन अघि वाफिया आबिद थियो ।
वलीद र मुरादका आमाबाबुको विवाह सन् १९९३ मा भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुकोमा एकपछि अर्को ९ जना छोरीहरुको जन्म भयो । यद्यपि, अहिले दुई जना छोरीहरुले लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि उनका सात छोरी र दुई छोरा भएका छन् । दुवै दिदीबहिनीको लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशन इस्लामाबादस्थित पाकिस्तान इन्सटिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजको चिल्ड्रेन अस्पतालमा डा। अमजद चौधरीको नेतृत्वमा १२ जना डाक्टरहरुको टोलीले गरेको थियो ।
डा. चौधरीका अनुसार यो बिमारी निकै कममा देखिन्छ । लगभग ०।५ देखि ७ प्रतिशतमा । उनी भन्छन्, ‘यो केसमा दुवै केटी नै थिए । तर, उनीहरुमा केटीको कुनै विशेषता नै थिएन । उनका अनुसार निश्चित उमेर पुगेर पनि उनीहरुमा महिनावारी सुरु नै भएको थिएन । जब उनकी आमाले उनको गुजरातस्थित अस्पतालमा जाँच गराइन् तब उनीहरुलाई पीआईएमएस चिल्ड्रेन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो ।
शुरुवाती परीक्षणपछि उनीहरुलाई ‘एटिपिकल जनेटेलिया’ भएको पत्ता लाग्यो । उनीहरुलाई लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशनको आवश्यकता भएको देखियो । यसका लागि उनीहरुको यौनाङ्गलाई अपरेशनको माध्यमबाट सामान्यस्थितिमा ल्याइयो । डा. चौधरीका अनुसार अपरेशनअघि र पछि उपचारको आवश्यकता पर्छ ।
अपरेशनअघि महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षण र काउन्सिलिङ गरिन्छ र अपरेशनपछि केही समय औषधीको माध्यमबाट हर्मोन पैदा गरिन्छ । डा. चौधरीले यसअघि पनि धेरैको अपरेशन गरेको र उनीहरुले अपरेशनपछि सामान्य जीवन बिताइरहेको जानकारी दिए ।